समाचार - काटि bla ब्लेड / काट्ने डिस्कको विशेषता र वर्गीकरण, काट्ने ब्लेडको प्रयोगको क्षेत्र।
काट्ने ब्लेड / काट्ने डिस्कको विशेषता र वर्गीकरण, काट्ने ब्लेडको प्रयोगको क्षेत्र।
काटि bla ब्लेड / काट्ने डिस्कको विशेषता र वर्गीकरण, काट्ने ब्लेडको प्रयोगको क्षेत्र।
दैनिक जीवनमा, यदि हामी यसमा ध्यान दियौं भने, प्राय: गृह सजावटमा काट्ने प्रक्रिया हुन्छ। यसले भुईं, धातु, काठ, वा अन्य सामग्रीहरूलाई इच्छित आकारमा काट्छ। धातु प्रसंस्करण उद्योगको लागि, धातु काट्ने मेसिन आवश्यक छ, तर वर्तमानमा कडा क्षमताको साथ एक किसिमको काट्ने मेशीन पनि छ। यसको घर्षण टुक्रा टुक्रा छन्। काट्ने टुक्रा को कुनै न कुनै सामग्रीले देखाउँदछ कि ती चक्ने पा gr्ग्राहरूसँग सम्बन्धित छ। तिनीहरूको मुख्य घटकहरू घर्षण र बाइन्डर रेजिनहरू हुन्। तिनीहरूको मुख्य कार्य चाहेको काटि stain प्रभाव प्राप्त गर्न साधारण स्टील, स्टेनलेस स्टील धातु र गैर-धातुत्मक सामग्री काट्नु हो। यसको आकार गोलो पातलो पाना हो।
ब्लेड विशेषताहरु काट्ने
काट्ने ब्लेडको सामग्री चयनको आफ्नै विशेषताहरू हुन्छन्, मुख्यतया गिलास फाइबर र राल। यी दुई सामग्रीहरू प्रबलित बन्धन सामग्री बनाउन प्रयोग गरिन्छ। तैयार उत्पादनहरू राम्रो गुण, उच्च तन्यता शक्ति, प्रभाव प्रतिरोध र झुकाउने शक्तिका हुन्छन्। तिनीहरू साधारण स्टील, स्टेनलेस स्टील, धातु र गैर-धातुको उत्पादन र ब्ल्याकिंगमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। सामग्रीको उत्कृष्ट चयन र उत्कृष्ट प्रविधिले काट्ने वस्तुहरूमा काट्ने टुक्राहरूको उच्च कटौती दक्षता सुनिश्चित गर्दछ।
सामग्री अनुसार, काट्ने डिस्क मुख्यत: फाइबर राल काट्ने टुक्रा र हीरा काट्ने टुक्रामा विभाजित हुन्छ।
१. राल काट्ने ब्लेड रालबाट बनेको हुन्छ, बिभिन्न सामग्रीको विभिन्न प्रकारका साथ। यो मुख्यत: मिश्र धातु इस्पात, स्टेनलेस स्टील र अन्य गाह्रो काटनेका सामग्रीहरूमा प्रयोग गरिन्छ, र यसको काटनेको प्रदर्शन विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण छ। काट्ने क्रममा, यसलाई दुई प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ, सुख्खा काट्ने र भिजेको काट्ने सहित। यस प्रकारको काट्ने ब्लेडले अधिक स्थिर शुद्धता प्रयोग गर्नुपर्दछ। यसबाहेक, काट्ने आवश्यकताको आधारमा, सामग्री र कटाईको टुक्रा कडा छनौट गरिन्छ, जसले कटाई दक्षतामा ठूलो सुधार गर्न र लागत बचत गर्न सक्दछ।
२. हीरा काट्ने ब्लेड। यो एक काटनेको उपकरण पनि हो, जुन निर्माण उद्योगमा बारम्बार देख्न सकिन्छ, त्यसैले यस प्रकारको काट्ने टुक्रा कडा र भंगुर सामग्रीको प्रशोधनमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ जस्तै ढु stone्गा, क concrete्क्रीट, नयाँ र पुरानो सडकहरू, सिरेमिकहरू, इत्यादि। उत्कृष्ट हीरा काट्ने ब्लेड मुख्यतया दुई भागहरू मिलेर बनेको हुन्छ: सब्सट्रेट र कटर हेड। म्याट्रिक्स मुख्य सहयोगी हिस्सा हो, जुन कटर टाउकोको बन्धनको लागि पनि प्रयोग हुन्छ, जबकि हीरा कणहरू कटर टाउको भित्र धातुमा लपेटिन्छ। कटर टाउको मुख्य रूपले काट्ने प्रक्रियामा प्रयोग गरिन्छ, किनकि यो अक्सर काटिन्छ, त्यसैले कटर हेड प्रयोगमा खपत हुनेछ, तर म्याट्रिक्सलाई कुनै नोक्सान हुनेछैन। अवश्य पनि, कटर टाउकोले काट्ने भूमिका खेल्छ किनकि यसले हीरा समावेश गर्दछ। हीरा अहिलेको सबैभन्दा कठिन सामग्री हो। यदि यसले वस्तुलाई मलाई कटर टाउकोमा काट्नुपर्दछ भने त्यसले वस्तुलाई काट्छ।